ကျ မ ရဲ့နှောင် ကြိုး – Hlataw.com
နှင်း ချည်နှောင်ခံရတာ နဲ့ ချည်နှောင်ရတာ ဘာကိုကြိုက်လဲဟင် နှင်းကတော့ ကိုယ့်ကိုအချည်မခံနိုင်သလို ကိုယ်တိုင်လဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ မချည်ချင်ဘူး သူ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ သူပဲလေ ဒါမဲ့ တခါတလေမှာ ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ပဲ ကိုယ့်အပြုအမူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ချည်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် တကယ့်ကိုအရုန်းရခက်တယ်မလား အခုလဲ မထင်မှတ်ပဲ ကိုယ်တိုင်ချည်မိတဲ့အကြောင်းလေးကို အထန်ကိုကို အထန်မမတို့အတွက် ဖော်ပြလိုက်တယ်နော်……။ ဖေ့ဘုတ်ဆိုတာ သုံးတတ်ရင် ဆေး . မသုံးတတ်ရင် ဘေး..ပဲလို့ လူတော်တော်များများ လက်ခံထားကြတယ်မလား ကျမ ငြိမ်းအိလွင်ကိုယ်တိုင်လဲ ဒီအဆိုကို ချွင်းချက်မရှိ လက်ခံထားသူတစ်ယောက်ပါ ဖေ့ဘုတ်သုံးတာ ကြာနေပေမယ့် ပုံများများမတင်ဖြစ် ဗဟုသုတရစေမယ့် ပို့စ်လေးတွေသာ လိုက်ရှယ်ရင်း ရိုးရိုးလေးပဲ အသုံးပြုသူပါ အပ်သမျှ ဖရန့် တေကိုလဲ သေချာစီစစ်ပီးမှလက်ခံတတ်တာ အကျင့်။
ပုံအများကြီးမတင်ပေမယ့် တင်မိတဲ့ပုံလေးတေက အချိုးအစားကျလွန်းတဲ့ ကျမရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကောက်ကြောင်းတွေကို ပေါ်လွင်နေစေတာမို့ ဆယ်လီ မဟုတ်ပေမယ့် လိုက် ရှယ် တော့ အများသား အရပ်ငါးပေ ခြောက်လက်မနဲ့ လိုက်ဖက်စွာ တင် ရင် အမို့အမောက်လေးတွေက မြင်ရသူပုရိသတွေကို စိတ်ချမ်းမြေ့စေဟန်တူပါရဲ့ မက်စင်ဂျာ မှာ လာဟိုင်းတဲ့သူတေလဲ မနည်းမနောပင် ရှိခဲ့သည် အဲ့ထဲမှာ နိုင်ငံခြားသားတေလဲ ပါသည် သူတို့ကိုတော့ လက်မခံဖြစ်ပါဘူး ကိုယ်ကမှ အင်္ဂလိပ်လို လည်လည်ပက်ပက် မပြောတတ် မရေးတတ်ပဲလေ…ဒါမဲ့ ဒါမဲ့ပေါ့လေ…..။ အဲ့ညက ကော်ဖီအသောက်များပီး တော်တော်နှင့်အိပ်မရတာနဲ့ ဆယ့်နှစ်နာရီလောက်မှာ ဖေ့ဘုတ်ထသုံးဖြစ်တယ် နယူးဖိ ကို အပေါ်ဆွဲ အောက်ဆွဲရင်းပဲ ဆယ့်နှစ်ခွဲသွားတော့ ကြည့်စရာက မရှိ လူကလဲ မအိပ်ချင်သေးတာနဲ့ မက်ဆေ့ဘက်ကို ခြေလှည့်ခဲ့မိတယ်။
တော်ရုံလူဆို စာပြန်လေ့မရှိတဲ့ ငြိမ်းရဲ့အကျင့်ကြောင့် မက်ဆေ့လေးက ခြောက်ကပ်နေသည် အွန်လိုင်းပြနေတာတွေ ရှိနေပေမယ့် သွားမဟိုင်းရဲဘူး ကိုယ်က စမဟိုင်းချင်တာရော အရင်ကမပြောပဲ အခုမှပြောရမှာ မျက်နာပူတာရောကြောင့်ပါ ယောင်ချာချာဖြစ်ရသည် မထူးတဲ့အဆုံး မက်ဆေ့ကနေ ဟိုင်းထားတာတွေကိုစာပြန်ပို့ အပေါ်ဒေါင့်(ထောင့်)မှာပေါ်နေတဲ့ …လေးကို နှိပ်လိုက်တယ် ဟော နာမည်အစုံ ပုံစံအစုံနဲ့ လူမျိုးအစုံ လာဟိုင်းထားတာတွေ့ရတယ် တချို့က ဆက်စ်အကောင့်တေ …အဲ့လိုဟာတေတော့ လက်မခံရဲပေါင် ဒါမဲ့ ပို့ထားတာလေးတော့ ကြည့်ဖြစ်သွားတယ် တကယ်ရှင် ကျားအင်္ဂါဆိုဒ်စုံနဲ့ အိပ်ယာပေါ်ကစကားလုံးအသုံးအနှုံးတွေ အများအပြားတွေ့ရတယ် အခုထိ တစ်ယောက်မှ လက်မခံဖြစ်သေး အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲကြည့်ရင်းပဲ မသိစိတ်က ဆက်စ် အကောင့်တေထဲပဲ ဝင်ကြည့်ချင်မိနေသည်….။
ဟိုင်း မမ အရမ်းလှနေတယ်နော် မမပုံလေးက အရမ်း ဆက်ဆီ ကျတယ်ဗျာ လိုးချင်တယ် မမအိုးက ရှယ်ကြီးနော် တစ်ခါလောက် ကုသိုလ်ဖြစ် ခံပေးပါလား စာတွေနဲ့အတူ သူ့ဟာပုံတေ အဆင့်အဆင့် …….. ဟိုင်း မမ မာနကြီးတယ်နော် ကြားဖူးတာတော့ မာနကြီးတဲ့မိန်းမတွေက အခံပက်စက်တယ်တဲ့ မမရောဟင် မောင်နဲ့တစ်ခါလောက် လိုးကြရအောင် စိတ်ချပါ မမကို အမုန်းလိုးပေးမှာပါ တွေ့ကြရအောင်နော် မောင့်လီးကိုလဲ စုပ်ပေးပါဦးဗျ အောက်မှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း သူ့လီးပုံတေနဲ့ အောကားအချို့ ……… ဆက်စ် အကောင့်ငါးခုလောက် ဝင်ကြည့်မိချိန်မှာတော့ ငြိမ်းရဲ့စိတ်တွေ လှုတ်ရှားလွန်းခဲ့ပြီလေ မိဘရဲ့လောင်းရိပ်အောက်မှာ ညိမ်ဝပ်ပိပြားခဲ့သမျှ တဒင်္ဂအခိုက်အတန့် ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုပဲ မက်မောနေမိသလားမသိ တော်ပီ တော်ပီ ဒီတစ်ကောင့်ကြည့်ပီး အိပ်မှ နို့မို့ဆို မလွယ်ဘူး အတွေးနဲ့အတူ ဆက်ဘွိုင်းဆိုတဲ့ အကောင့်လေးရဲ့ ကမ်းလှမ်းစာလေးတွေကို ရင်ခုန်စွာ ဝင်ဖတ်မိသည်။
ဟိုင်း… တျဲရေ ဆံပင်လေးဒီ့ထက်အရှည်ထားနော် ခါးပေါ်လောက်ဆို ဆွဲလိုးလို့ပိုကောင်းတယ်လေ တကယ်ဗျာ အချိုးအစားက အတိုးမများရင် ခိုးစားချင်စရာကြီး တရက်လောက်တွေ့ရအောင်လေ နှစ်သောင်းလောက်အထိ အဆင်ပြေတယ် တျဲကိုလေ နှုတ်ခမ်း နို့ ဖင် ဆံပင် မျက်နာ အကုန်ကြိုက်တယ် အဖုတ်တောင်မမြင်ရသေးလို့ ထည့်မပြောတာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုးချင်တယ်ကွာ …… ဟူးးး ပင့်သက်တစ်ခုကို မှုတ်ထုတ်ရင်း အဆမတန်ခုန်နေတဲ့ ရင်ဘက်လေးကို ဖိနေရသည် ခါးလည်လောက်ရှိပြီး နက်မှောင်ကျော့ရှင်းသောဆံနွယ်တွေကို တစ်ချက်ကိုင်ကြည့်ရင်း ဆွဲလို့ရတာပဲဟုတွေးမိသည် မလိုအပ်ပဲ ဘာလို့မောနေမိပါလိမ့် ယားသလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ ပေါင်ကြားလေးကို အသာထိတို့ကုတ်မိတော့ ကုတ်လို့မပြေတဲ့အယားမျိုးမှန်း သိလာရသည် အနည်းငယ်စိုသလိုဖြစ်နေတာက ဘာကြောင့်လဲဟု တွေးမရ အသက်ပဲ နှစ်ဆယ့်လေးထဲရောက်လာပြီ အခုထိ အပျိုရည်မပျက်သေး။
အထိန်းအကွပ်ကောင်းလွန်းတဲ့ မိဘတွေကြောင့် ငြိမ်းမှာ လှူတ်ချင်၍ပင် လှူတ်၍မရ….ကိုယ်တိုင်လဲ အရှက်သည်းမိသည်လေ ပွဲတိုးတာမျိုး သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်လည်တာမျိုးနဲ့ ရှိူးပွဲတွေ သွားကြည့်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာသာ တခါတရံ အနှိုက်ခံ အထောက်ခံရဖူးတာပဲ ရှိသည် လက်တွေ့ကျကျတော့ မခံဖူးသေးတာ အမှန်…..။ ရင်သားပေါ် အုပ်ကိုင်ထားတဲ့လက်က မရည်ရွယ်ပဲ ဖျစ်ညှစ်မိနေသည် အာသာဖြေတာမျိုး ရှိခဲ့ဖူးပေမယ့် ဒီတစ်ခါ အာသာဖြေရမှာက ကိုယ်တိုင်လျှာရှည်ပီး ဆက်စ်အကောင့်တေထဲ ဝင်တာကြောင့်ဆိုတဲ့အတွေးက နဲနဲတော့ ရီချင်စရာအကောင်းသား…… ဟိုတွေး ဒီတွေးနဲ့ နို့အုံတွေကို ဆုပ်နယ်မိနေပေမယ့် စိတ်တော့ အရမ်းမထန်သေး ဒီချိန် လိုင်းပိတ်ပီးအိပ်လိုက်ရင် ရနိုင်သေးပေမယ့် မသိစိတ်က တစ်ခုခုကို တောင့်တမိနေသည် မထူးတဲ့အတူတူ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ပုံတင်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ဆက်စ်အကောင့်တထဲ တစ်ခုကို လက်ခံလိုက်သည်။
အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ်ဘာပြောပြော သူတို့မသိနိုင် သိလျှင်ပင် အဝေးကြီးမို့ ပြဿနာမရှိဘူးမလား……။ တင်ထားတဲ့ပုံကို သဘောကျမိသည် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာအဝတ်မှမရှိပဲ သူ့လီးကြီးကို အားပါးတရ ဆုပ်ကိုင်ကာ ဖီးလ်အပြည့်နဲ့ ကစားနေသည့်ပုံပါ အမြောင်းမြောင်းထနေတဲ့သူ့ကြွက်သားတွေအပြင် ဖုထစ်ကျယ်ဝန်းတဲ့ သူ့ရင်ခွင်ကြီးက ငြိမ်းတို့မိန်းမသားတွေအကြိုက်လေ ပိုပြီးဆွဲဆောင်နေတာက ခြောက်လက်မ ရှစ်လက်မလောက်ရှိနိုင်တဲ့သူ့လီးကြီးက ရှည်ရုံတင်မဟုတ်ပဲ ကြီးလဲကြီးသည် ဒါကြီးနဲ့သာ အလိုးခံရလို့ကတော့ ငြိမ်းရယ် နင့်ဟာလေး စုတ်ပြတ်သွားမလားပဲ နော် အတွေးနဲ့အတူ ခစ်ခနဲတစ်ချက်ရယ်လိုက်ရင်း မနေနိုင်စွာ လုံခြည်လေး ဖြေလျော့ကာ ပင်တီအထက်ကနေ အဖုတ်လေးကို ဖိပွတ်မိသည် အားးး…..စိတ်ထဲက တိုးတိုးအော်မြည်ရင်း ဖြတ်ခနဲ သတိတစ်ချက်ဝင်လာကာ ဖုန်းလေးကိုချ အခန်းတံခါးဝကို ခြေဖွကာ ခပ်သွက်သွက်လေးလျှောက်သွားသည်။
လော့ကို အမြဲဖွင့်ထားတတ်တဲ့အကျင့်လေးက ဖျောက်မရ အိမ်မှာလဲ သားမိသားဖ သုံးယောက်ပဲရှိတာမို့ ငြိမ်းရဲ့ အခန်းတံခါးလေးက အမြဲဟနေတတ်သည်လေ ချောက်ခနဲမည်အောင် လော့ချလိုက်ရင်း ကုတင်ဆီကို တရွေ့ရွေ့လျှောက်လာလိုက်သည် တကယ်ဆို ဖေဖေနဲ့မေမေက အောက်ထပ်မှာပါ အကြောင်းမရှိပဲ ဝင်ထွက်လေ့မရှိတာမို့သိပ်စိုးရိမ်စရာမရှိ ဒါမဲ့ အထန်ဘက်ကို ချည်းကပ်မိတဲ့ခဏမှာ ဘာတွေဆက်လုပ်မိမယ်မသိတာကြောင့် သေချာအောင် တံခါးပိတ် လော့ချထားရသည်လေ…. စိတ်လွတ်လက်လွတ်ပုံစံနဲ့ အစောက လက်ခံထားတဲ့ ဆက်စ်အကောင့်ထဲ ကြည့်မိတော့ ပို့ထားတာတေတောင် တော်တော်များနေပီ ဟယ်လို ဘေဘီဆိုတာကလွဲရင် ကျန်တာ အောကားတွေချည်းပင် လုံးဝအိတ်ဒီတေချည်းမို့ လီးနဲ့စောက်ဖုတ် အဝင်အထွက်ထင်ရှားသလို စုပ်တာ မှုတ်တာတွေကလဲ ပီပြင်လှသည်။
အခန်းက လုံးဝအလုံခန်းမို့ အသံနည်းနည်းတိုးကာ နားကြပ်မတပ်တော့ပဲ ကြည့်ဖြစ်သည် တကယ့်ကို ထန်မိလာသည်မို့ စိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ အဝတ်တေ ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ပြီးတော့ အတွေးတစ်ခုနဲ့အတူ…။ ” အရမ်းကြိုက်တာပဲ ”အဲ့လိုအလိုးခံချင်လိုက်တာမင်းဘာပြောတာလည်း? သူ့ရဲ့ပြန်စာလေးကြောင့် သဘောကျကာတစ်ခစ်ခစ်ရယ်မိသည်သူ့လိုနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က ငြိမ်းတို့ရဲ့ဘာသာ စကားကို မသိနိုင်မှန်း ကြိုတွက်ထားတယ်လေ ခ်ခ် ” ကျမကို လိုးချင်လားလို့ မေးတာ ”ရှင့်လီးကြီးနဲ့ အလိုးခံချင်လို့လေ ခ်ခ် ” လုပ်ပါ တစ်ခါလောက်လိုးပေးစမ်းပါ ”အရမ်း ယားနေလို့ ပြောလဲပြော ငြိမ်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတွေကိုလည်း မျက်နာလေးပဲ ချန်ကာ ရိုက်ပို့လိုက်သည် “မင်းမျက်နာလေးပါပြပါ “. တက်လာတဲ့ပြန်စာလေးကြောင့် တစ်ချက်စဉ်းစားကာ ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေဆိုတဲ့အသိနဲ့ မျက်နာပါရိုက်ပို့လိုက်သည် သူ့ရဲ့စာကလဲ ဝါကျမှန်ရဲ့လားမသိ ဖတ်ရတာတမျိုးကြီးရယ်။
ဒါမဲ့ ထန်နေတဲ့ငြိမ်းကတော့ မျပ်နာရော အဖုတ်ရော နို့တွေပါ အကျအနရိုက်ရင်း တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံပို့ပစ်လိုက်သည် …….. ကိုယ်နားလည်သလိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်း ကျေနပ်မိသည် ” ရှင် ကျမကို မလိုးချင်ဘူးလားဟင် ”ရှင့်လီးကြီးကို အရမ်းကြိုက်တာပဲ ”ကျမကို ခဏလောက် စုပ်ခွင့်ပေးပါနော် ပြောလည်းပြော ပါးစပ်ထဲ လက်ခလည်လေးထည့်ကာ စုပ်နေတဲ့ပုံလေး ပို့လိုက်သည် တိုက်ဆိုင်တာလားမသိ သူ့ဆီက လီးပုံတွေ ပြန်ရောက်လာသည် တင်ထားတဲ့ပုံလောက်မကြီးပေမယ့် ခြောက်လက်မလောက်ရှည်ပီး တော်တော်တုတ်သည် ငြိမ်းပိုခိုက်သွားတာက သွေးကျောအမြောင်းမြောင်းထကာ ဖြူမလိုရဲမလိုနဲ့ အရမ်းသန့်နေတာကိုပါ သေချာကြည့်မှ သူ့လီးထိပ်မှာလဲ အရည်လေးတွေစို့နေသည်.. နို့ကိုညှစ်လိုက် အဖုတ်ကိုနှိုက်လိုက် စာရေးလိုက်နဲ့ တကယ့်ကိုလက်မလည်တာပါ…..။ ဟော နောက်ထပ် နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်။
သူကတော့ မိန်းမက ထိုင်ခုံပေါ် ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး နောက်ကလူက ဆံပင်ဆွဲရင်း လိုးနေတဲ့ပုံတင်ထားသည် သေချာကြည့်မှ လိုးနေတာက အဖုတ်မဟုတ်ပဲ ဖင်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတော့ ငြိမ်းမှာ အလိုလိုဖင်ရှုံ့သွားမိသည် ဟုတ်တယ်လေ လီးရည်စိုရွှဲနေပီး မဆန့်မပြဲဝင်နေပုံကြီးက အူယားစရာ သူပို့ထားတာကြည့်မိတော့ ပုံစံအစုံတွေ့ရသည် တစ်ယောက်ချင်းရော တူးဘိုင်ဝမ်း တွေအပြင် ပုံစံအမျိုးမျိုး လိုးနေတဲ့ရုပ်ကြွတွေ အို….ယားလိုက်တာရှင် ခေါင်းလိမ်းဆီအမျိုးမျိုးထဲက အဆင်ပြေမယ့်တစ်ခုကိုယူကာ အဖုတ်ပေါ် လောင်းချပြီး ပွတ်လိုက်သည် ဒီလက်နဲ့ ဒီအဖုတ်က သိပ်တော့မစ်ိမ်း ခေတ်မီစက်ပစ္စည်းတွေ မဝယ်တတ်တာမို့ မိမိလက်အပြင် ခရမ်း ဒန့်တလွန် သခွားသီးတို့ကို သိပ်မကြီးတာတွေကို သုံးဖူးတယ်လေ လီးအစစ်ရဲ့အရသာကို မခန့်မှန်းတတ်ပေမယ့် အပျိုစင် ငြိမ်းအတွက် အဲ့ပစ္စည်းလေးတွေက အရသာအပြည့်ပေးနိုင်သလိုရှိသည်….။
ထားပါ အထိန်းအကွက်မရှိ လွှတ်ထားမိတဲ့စိတ်က တားမရနိုင်လောက်အောင် ထန်နေတာမို့ ” အရမ်းကြိုက်တာပဲ ”အဲ့လို အလိုးခံချင်နာ ” ကျမအဖုတ်ကို ကွဲအောင်လိုးပေးစမ်းပါ ”ညညဆို ဒုက္ခပေးလွန်းလို့ စာလေးတွေပို့ရင်း ရိုက်ပီးသားပုံတေကို ပို့ပေးလိုက်သည် တစ်ဘက်က ပြန်စာမလာ စဉ်းစားနေတာပဲလား စာကိုနားမလည်လို့ ကြောင်နေတာလားမသိ မိမိရဲ့စကားကို သူနားမလည်မှန်းသိနေတာမို့ သဘောကျစွာ ရယ်မိပြန်သည် ” ရှင် ကျမအဖုတ်ကို မကြိုက်လို့လားဟင် ”ဘာမှလဲ ပြန်ပြောဘူး ” တကယ်အလိုးခံမှာပါ ” ဘယ်လိုလိူးချင်လဲ ပြောလေ သူမသိဘူးဆိုတဲ့စိတ်ရယ် အရမ်းခံချင်နေတာရယ်ကြောင့် စိတ်ထဲရှိသလိုပြောချလိုက်သည် တစ်ဘက်က ဘာမှမပြော ညိမ်သက်နေသည် ဒါမဲ့ သူ့လီးပုံတေ ထုနေတဲ့ဗွိဒိယိုတော့ ပြန်ပို့လာသည် သူ့လီးက ဟိုတျောက်လောက်မကြီးပေမယ့် ထိပ်အငုံနဲ့ တော်တော်သန့်သည်။
ဘာဖြစ်ဖြစ် ထန်နေချိန်မို့ ” အို ယောက်ျားရယ် အရမ်းချစ်တာပဲ ” မိန်းမကလေ ယောက်ျားလီးကို လွမ်းနေတာ ”စုပ်မယ်နော် ”ခဏနေမှ လိုးပေး ” နော် ယောက်ျား စာတွေအဆက်မပြတ်ပို့ရင်း လက်ကလဲ အဖုတ်လေးထဲ ထိုးဆွမိသည် ချွန်ထနေတဲ့ နို့သီးထိပ်လေးလဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတ်ခြေပစ်လိုက်သည် အင်းပါမိန်းမရယ် ယောက်ျားလဲ မိန်းမစောက်ဖုတ်ကိုလွမ်းနေတာ မိန်းမက လီးစုပ်ကျွမ်းတော့ မမေ့နိုင်ဘူး စွဲနေပီမိန်းမရေ စုပ်စုပ် ဟင် အာ သွား သွားပီ….အတွေးနဲ့အတူထူပူသွားသည် တကယ်ပါ နိုင်ငံခြားသားအမှတ်နဲ့ စိတ်ထဲရှိသလိုပြောမိသွားတာပါလို့ သူ့ကိုပြောပြရင် ယုံပါ့မလားဟင် သေချင်တာပါပဲ …ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အပြေးအလွှား စဉ်းစားပေမယ့် အဖြေက ထွက်မလာ ရုတ်တရက်အတွေးတစ်ခုရကာ မြန်မြန်ပင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည် ဒီဘက်မှာပြဿနာတက်နေတုန်း အစောကနိုင်ငံခြားသားဆီက စာဝင်လာသံနဲ့အတူ။
လိုးကြမယ်..ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဂရုတစ်ခု ဝင်လာသည်.. ဂရုထဲ ဝင်ကြည့်မိတော့ ” ဟင် ဒါ ဒါ အို…. ဂရု့က သုံးယောက်တည်းပါ ငြိမ်းရယ် သူရယ် ပီးတော့ လောလောလတ်လတ် ဘလော့လိုက်တဲ့ ဟိုတစ်ယောက်ရယ် ” မင်္ဂလာပါ ငြိမ်းရေ..ငြိမ်းဘလော့လိုက်တာ ကိုယ့်ညီပါ မရှက်ပါနဲ့ ငြိမ်းရယ် ..ဆက်စ်အကောင့်ပဲသုံးတာပါ ကိုယ်တို့က မယုတ်မာပါဘူး ” ” ရှင်……. သွားပြီ ကုန်ပြီငါ့အရှက်တွေ နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပြီး စိတ်ထဲရှိသလိုပြောခဲ့သမျှ အခုမှအရှက်လုံးလုံးကွဲရပြီ ” မိန်းမ ဘာလို့ဘလော့တာလဲ ” ပြန်ဖြည်ပေးနော် မိန်းမ ” မိန်းမပဲ လိုးပေးဆို ” ရှင် ငြိမ်း ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ အခုမှ ကျားရှေ့မှောက်လျက်လဲမှန်းသိရသည် အခြေအနေက လျှောက်လွှဲချက်လေးပင် ပေးစရာမရှိ မိငြိမ်းအိ…နင်စတဲ့ဇာတ်လမ်း နင်ဘယ်လိုရှင်းမလဲ မိန်းမတဲ့ ခေါ်နေပီ ထူးလိုက်လေ ထူးလိုက်လေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အပြစ်တင်ရင်း ရှက်စိတ်နဲ့တုန်လာသည် အခုထိ ဘာဆက်လုပ်ရမည် မသိသေး။
သူက စပြောပြောတာလား ထန်ပြီးပြောတာလား မသဲကွဲ လောလောဆယ် မိမိအဖို့ ပြေးစရာမြေမရှိ ” ကဲပါ ငြိမ်းရယ် ဘလော့ဖြည်ပေးလိုက်ပါ ငြိမ်းလဲ အလိုးခံချင်နေတာပဲမလား ကိုယ်တို့လာလိုးပေးလို့ ရပါတယ် ငြိမ်းနေတဲ့နေရာလဲ သိတယ်လေ ……. ရှင်လို့ပင် ရေးမပို့နိုင်တော့ မိမိချည်တဲ့ကြိုးက မိမိကို လှုတ်မရအောင် တုပ်နှောင်နေလေပြီ ငြိမ်းဘက်က ညိမ်နေတော့ သူ့တို့တစ်လှမ်းတက်လာသည် ငြိမ်းပို့ခဲ့သမျှ ငြိမ်းရဲ့ပုံတေအပြင် ငြိမ်းပြောခဲ့တဲ့စာတွေပါ ရိုက်ပြီး ပို့လာကြသည် ဒါဘာသဘောလဲဟု မေးစရာမလို…ဒီအချိန်အလိုးခံရလို့ အမှုဖွင့်ရင်တောင် ဒီအရာတွေက သက်သေအဖြစ် သူတို့ဘက်က ရပ်တည်ကြတော့မည်……. သူတို့ပြောသလို ဘလော့လေးအရင်ဖြည်ပေးရင်း အကျိုးအကြောင်းမေးမိတော့မှ ဟိုဘက်တစ်ရပ်ကွက်ကျော်က ကိုကိုနိုင် ကိုကိုမောင် ဆိုသော ညီအကိုဖြစ်နေသည် ငြိမ်းကိုခိုက်လို့ ဆက်စ်အကောင့်တေနဲ့ စိတ်ဆွပြီး ဖန်လိုးဖို့ ချဉ်းကပ်လာတာတဲ့လေ။
လှုတ်လို့မရအောင် ချည်တဲ့ကြိုးနဲ့ ကျယ်ဝန်းတဲ့ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ငြိမ်းအတွက်ရွေးချယ်စရာ လမ်းများများစားစားမရှိ………။ တုံယင်နေတဲ့ လက်တွေနဲ့အတူ ပြုတင်းတံခါးကို ထဖွင့်လိုက်သည် မကြာ အမှောင်ထုကြားကနေ အရိပ်နှစ်ခုက ပြူတင်းပေါက်ကိုကျော်ကာ အိမ် အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသည်…..။ အိမ်ရဲ့တံခါးမကြီးသော့က မေမေ့ဆီမှာမို့ ပြူတင်းကပဲ ဝင်လို့ရသည်လေ ထိုအရိပ်နှစ်ခုကိုဦးဆောင်ကာ ငြိမ်းအခန်းရှိရာ အပေါ်ထပ်သို့ တက်ခဲ့လိုက်ကြသည် အခန်းထဲရောက်တော့ လော့သေချာချကာ ငြိမ်နေဖြစ်သည်…..။ ” လှလိုက်တာ မိန်းမရယ် တကယ်ပဲ ….ပြွတ် ” အွန့် အ အကို ပြောပြောဆိုဆိုပင် ခါးကိုသိမ်းဖက်ကာ ကော့သွားတဲ့အနေအထားမှာကိုကိုမောင်က ငြိမ်းရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကို အငမ်းမရ နမ်းလာသည် ထို့အတူ အတွင်းခံဆို ဘာမှမပါတော့တဲ့ ငြိမ်းကိုယ်ပေါ်က တစ်ထည်တည်းသော လုံချည်နဲ့ အိင်္ကျီကို ကိုကိုနိုင်က ချွတ်သည်။
အဝတ်ကင်းစင်သွားတဲ့ ငြိမ်းရဲ့ ဖင်ကြားကို သူ့လီးကြီးနဲ့ထောက်ကာ နောက်ကနေ နို့အုံတွေကို ဆုပ်ကိုင် ကစားနေသည် ကိုယ့်အမှားနဲ့ကိုယ်မို့ ငြိမ်းမှာရှက်ခွင့်မရသလို ငြင်းခွင့်လဲမရ အခုမှသိသော ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာ ပြုသမျှ နုနေတဲ့ဘဝမို့ သိမ်ငယ်သလိုလို ငိုချင်သလိုလို ” မိန်းမ ကိုကိုတို့ ကုတင်ပေါ်တက်ရအောင် ” ဟင် ငြိမ်းရဲ့ အံ့ဩသလိုအမူအယာကြောင့် ကိုကိုနိုင်က သဘောပေါက်သလိုတစ်ချက်ရယ်ရင်း ” ဒီလိုလေ ငြိမ်းရဲ့ ကိုယ့်နာမည်က ကိုကိုနိုင်လေ ကိုယ့်ညီနာမည်က ကိုကိုမောင်ဆိုတော့ ကိုယ့်ကို ကိုကိုလို့ခေါ်ပီး သူ့ကို မောင်လို့ခေါ်လိုက် အဲ့လိုဆို အဆင်ပြေမယ်လေ ” သူပြောတာလဲဟုတ်နေသလိုပဲမို့ အတွန့်မတက်တော့ပဲ ငြိမ်နေလိုက်ရသည် ကုတင်ပေါရောက်တော့ ငြိမ်းကို ပက်လက်နေစေပြီး ပေါင်ကားခိုင်းကာ ကိုကိုက မှုတ်ပေးသည် ငြိမ်းလေ ကိုကို့ရဲ့လျှာအစွမ်းအောက်မှာ လိမ့်နေအောင် ခံနေရင်း။
တစ်ခါ မောင်က နို့ကိုဖျစ်ညှစ်ကစားရင်း သူ့လီးကြီးကို ငြိမ်းပါးစပ်နားလာတိုးပေးသည် ” မိန်းမ မောင့်လီးစုပ်ပေးဦး ကိုကို့ရဲ့လျှာအစွမ်းနဲ့ ထိမ်းမနိုင်အောင်မိနေတာမို့ ဘာမှမစဉ်းစားတော့ပဲ ခေါင်းလေးကြွကာ လှမ်းငုံလိုက်သည် ထိပ်ပိုင်းလေးပဲဝင်ကာ တစ်နေသည် ရသလောက်ငုံပေးလိုက်တော့ မောင်က ခါးကိုလှုတ်ခါညှောင့်သည် ကိုကိုကလဲ ဖင်ဝကို လက်နဲ့ထိုးဆွရင်း စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကို သူ့လျှာကြီးနဲ့ အားရပါးရ သပ်တင်ထိုးယက်နေတာမို့ ဖော်မပြနိုင်တဲ့အရသာထူးကို အပြိုင်ထဲခံစားရကာ ဟန်အဆောင်နိုက်တော့ပဲ ဖင်ကိုမြှောက်ကာ မြှောက်ကာ ကော့ခံပေးမိသည် တကယ့်ကို ဖီးလ်အပြည့်ခံစားနေချိန် ရုတ်ရက်ဆိုသလို နှစ်ယောက်လုံးရပ်တန့်ကာ ကြည့်နေတာမို့ ငြိမ်းမှာ ပက်လက်အနေအထားကပင် ကြောင်အန်းအန်းလေး ဖြစ်သွားရသည် ” ဟင် ဘာ ဘာလို့လဲဟင် ဆက်လုပ်ပေးပါ မရပ်ပါနဲ့ လို့ပြောချင်ပေမယ့်ပြောမထွက်။
နားမလည်နိုင်စွာ မေးမိတော့မှ သူတို့က ပါလာတဲ့ဖုန်းကိုယ်စီထုတ်ကာ ငြိမ်းကိုတည့်တည့်ချိန်ထားကာ ကိုကိုက ” အမှတ်တရ ဗိဒိယိုလေး ရိုက်ချင်လို့ မိန်းမကိုကိုတို့ကို မက်ဆေ့မှာပြောခဲ့သလိုပြောပေး အဲဒါပြောပြီးရင် လိုးပေးမယ် ” ”ရှင်………. အခုမှ အကြတ်ရိုက်ရသည် ဆိုလိုတာက လိုးပေးဖို့ ငြိမ်းဘက်က ခခယယ တောင်းပန်ရမယ်ပေါ့ တောင်းပန်မှ လိုးပေးမယ်ပေါ့ မတောင်းပန်ရင်ရော ဟင့်အင်း မတောင်းပန်လို့မရ ငြိမ်းရဲ့အရှက်ကုန်က သူတို့လက်ထဲမှာလေ အတွေးနဲ့အတူ မိမိရှေ့မှာ လီးအတောင်သားနဲ့ ကင်မရာကိုင်ကာ ရပ်နေသော ဘာမှမတော်တဲ့ လင်ယောက်ျားနှစ်ယောက်ကို တစ်လှည့်ဆီကြည့်လိုက်ရင်း ပင့်သက်လေးချကာ ထလိုက်သည် မထူးတဲ့အတူတူမို့ သရုပ်တူအောင် လက်တစ်ဘက်ကို နို့အုံဆုပ်ကိုင်ရင်း ကျန်တစ်ဘက်က နှုတ်ခမ်းလေးကိုင်ကာ ” ဟိုလေ ကျမကို လိူးပေးကြပါနော် ”ကျမလေ အရမ်းအလိုးခံချင်လို့ပါ ” အရမ်းယားနေပီရှင့် ”လိုးပေးကြပါနော်။
အား… အား… ဟင့်… လိုးပေးပါ…. လိုးပေးကြပါ ပြောလဲပြော လက်တစ်ဘက်ကိုနောက်မှာထောက်ကာ ကျန်လက်တစ်ဘက်နဲ့ အဖုတ်လေးကို ဖြဲပေးထားလိုက်သည်….။ ကျေနပ်သွားတဲ့ သူတို့မျက်နာကို ရဲရဲမကြည့်ရဲ ဖြေးလေးစွာ ကုတင်ပေါ်တက်လာသောမောင်က ငြိမ်းကို ပက်လက်လဲစေကာ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုထမ်းပီး အကျအန နေရာယူရင်း သူ့လီးကြီးနဲ့ အဖုတ်ဝတေ့သည် ကိုကိုက မောင့်ရဲ့လီးအဝင်ကို သူ့ဖုန်းကင်မရာနဲ့ အသေချာချိန်ရင်း ခေါင်းညိတ်ပြသည် ” အားးး မောင် ဖြေးဖြေး တင်းကျပ်စွာဝင်လာတဲ့ မောင့်ရဲ့လီးတုတ်တုတ်ကို အပျိုစင်အဖုတ်လေးက ချက်ချင်းလက်မခံနိုင်စွာ တင်းခံနေသည် အထန်စိတ်နဲ့ ခံနေရပေမယ့် နာကျင်သွားတာကြောင့် တစ်ချက်အော်ရင်း တောင်းပန်ရသည် ” မိန်းမပဲ အလိုးခံချင်တယ်ဆို အခုမှတော့ အော်မနေနဲ့ မရတော့ဘူး မောင်က ပြောပြောဆိုဆိုပင် ဖင်ကိုမြောက်သွားအောင်ကြွာ အားနဲ့ဖိချသည်။
အား… အား… မောင်…. မိန်းမကို…. သနားပါဦး…. အား… မရဘူး… မရဘူး….တကယ်ပင်နာကျင်ရသည့် အော်သံကျယ်သွားရသည် သာမန်အိမ်မျိုးဆို ငြိမ်းအော်သံနဲ့ပင် အပြင်ကကြားနိုင်သည် ငြိမ်းအော်နေတားနေပေမယ့် မောင်ကမရပ် ခြေနှစ်ချောင်းကိုထမ်းကာ တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်ထည့်သည်မို့ အသည်းခိုက်အောင်နာက အဖုတ်က သွေးချင်းချင်းနီသွားသည် ငြိမ်းမှာ အံကျိတ်အော်ရင်း လက်တွေကလည်း ဆွဲမိဆွဲရာ မွေ့ယာကြီးကို အားကုန် ကုတ်ခြစ် ဆွဲထားရင်း မောင့်ရဲ့ဆောင့်ချက်တွေကို ကော့ထိုးခံရသည် ” အား အဟင့် မောင် မရဘူးလို့ ခဏရပျပါဦးဆို မရဘူးလို့ အားးး ” အား အား အား ” အား မောင်ရယ် အား ဟင့် အား တစ်စတစ်စ အဝင်အထွက်မှန်လာတာနဲ့အတူ နာကျင်မှုက သက်သာလာကာ အဆင်ပြေလာသည် ” အား မောင် ဆောင့် ဆောင့် အား ဟင့် ကောင်းတယ် ကောင်းတယ် ” လိုး မောင့်လီးကြီးနဲ့ လိုးပေး အား အား အု အူး မနေနိုင်စွာငြီးတွားရင် အလိုးခံနေခိုက်။
ဗိဒိယိုရိုက်နေတဲ့ကိုကိုက အနားကပ်လာကာ ငြိမ်းပါးစပ်ထဲကို လီးထိုးထည့်တာမို့ စုပ်ပေးရပြန်သည် မှန်တင်ခုံနဲ့ ထိုင်ခုံပေါ်မှာတော့ ဖုန်းနှစ်လုံးက ငြိမ်းတို့လုက်သမျှကို မှတ်တမ်းတင်နေသည် ” အား အား မိန်းမ မောင်ပီးတော့မယ် ” အား မောင်ပီးရင် မျက်နာလာပန်းမယ် မျက်စိမှိတ်ထား မောင်က ပြောလဲပြော အဆက်မပြတ်လဲဆောင့်ကာ ဆယ့်ငါးချက်ခေါက်ဆောင့်ပီးချိန်မှာတော့ ငြိမ်းအရည်တွေပန်းထွက်ကာ တစ်ချီပီးသွားသွားသလို မောင်လဲ ငြိမ်းမျက်နာပေါ် လီးရည်တွေပန်းကာ တစ်ချီပီးသွားသည် နှစ်ယောက်သား မောဟိုက်ကာ ခဏငြိမ်သက်သွားစဉ် ကိုကိုက ” ကဲ မိန်းမ ကိုကို့အလှည့်နော် ထ လေးဘက်ထောက်ကုန်းပေး ” ရှင် အခုမှ ပီးထားတာမို့ ဘာမှအဆင်သင့်မဖြစ် မောင်ရဲ့ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် ကျိန်းစပ်နေတဲ့အဖုတ်လေးက မောင့်လီးထက်ကြီးတဲ့ နောက်ထပ်လီးတစ်ချောင်းကိုခံဖို့ လန့်နေမိသည် ဒါမဲ့ ငြိမ်းမှာ ငြင်းခွင့်မရှိ ..အားမပါစွာထရင်း ကုန်းပေးရသည်။
ကိုကိုက ခေါင်းလိမ်းဆီအချို့ကို တင်ပါးပေါ်ဖြန်းကာ လက်နဲ့ အနှံ့အပြားရောက်အောင် ပွတ်ပေးသည် အထူးသဖြင့် ဖင်ဝကို ရွှဲနေအောင်စွတ်ကာ လက်နဲ့ထိုးဆွသည် ” အ ကို ကိုကို ဘာလုပ် အနည်းငယ်ပဲနာတာမို့ ခါးလေးတွန့်ရင်းမေးမိတော့ ကိုကိုက ဘာမှပြန်မဖြေ ” ဟင် မောင် ဘာလုပ်တာလဲလို့ ခေါင်းရင်းမှာ လာထိုင်တဲ့မောင်က ငြိမ်းရဲ့ခေါင်းကိုဖိချကာ ခေါင်းပေါ်ကို သူ့လီးတင်ရင်း ကစားနေသည်လေ ” အသာနေလေ မိန်းမ ဒီမှာ ပေနေလို့ သုတ်နေတာ ထူထဲနက်မှောင်တဲ့ဆံပင်တွေကြားမှာ လီးက လွန့်လူးနေသလို ဖင်ပေါက်ကို ဆွနေတဲ့ကိုကိုကလဲ သူ့လီးကြီးနဲ့ တေ့လာသည် ” အာ ကိုကို အာ့ဖင်လေ ဘာလုပ်တာလဲလို့ ” လိုးမလို့လေမိန်းမရဲ့ စိတ်ကိုလျော့ထား ဖင်ကိုရှုံ့မထားနဲ့ ”ရှင် အာ မရ မရ အားး ဟင့် ကိုကို ကိုကို အငြင်းစကားကို ဂရုမစိုက် မာထန်နေတဲ့သူ့လီးကြီးကို ဖင်လေးထဲ မဆန့်မပြဲထည့်လာသည် ဖင်ရဲ့နာကျင်မှုကြောင့်။
ဆံနွယ်တွေနဲ့ သူ့လီးကိုရစ်ပက်ကာ လုပ်နေတဲ့မောင့်ကို အပြစ်မဆိုအား ကိုကိုပြောသလို စိတ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့ချရင်း ဖင်လေးကိုလဲ အီးညှစ်သလို စူပွပွလေး လုပ်ကြည့်သည် ” ဘွတ် ” အားး ဟင့် ရှီး ကိုကိုဖြေးဖြေး လီးဒစ်ဝင်လာတဲ့အထိအတွေ့ကြောင့် ရတော့မယ်ဟု အားတင်းဖြစ်သည် …တဖြေးဖြေး လိုးညှောင့်ရင်းက တဝက်မကဝင်လာတော့ စအိုက အောင့်သက်သက်နဲ့ အမည်မသိတဲ့အရသာထူးက ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ တိုးဝင်လာသည် ” အား ကိုကို ရတော့မယ် အောင့်တယ် အားး ” အား ကိုကို ထပ်ထည့်ကြည့် ထည့် ထည့် လီးရဲ့အဝင်အထွက်အတိုင်း တဘွတ်ဘွတ်နဲ့ မြည်နေသံက အသည်းယားချင်သလိုလို သာယာနေသည် ရမ္မက်ရဲ့တွန်းအားကြောင့် ခပ်ဆဆအလိုးခံရတာကို အားမရချင် ခေါင်းကိုဖိကာ ဆံပင်ကိုလိုးနေတဲ့ မောင့်ရဲ့လီးကြီးကို အမှတ်မထင်ဆုပ်ကိုင်ရင်း ပြွတ်ခနဲစုပ်ပစ်လိုက်သည် ” အွန့် ရှီး မိန်းမ ဘာဖြစ် ” အားမရဘူးရှင့် သိရဲ့လား။
ထ ပါးစပ်လိုးပေး ထန်နေတဲ့စိတ်က အပျိုဂုဏ်ရော ဘာရောနားမလည် ခုမှစခံဖူးပေမယ့် မငြင်းသာတဲ့အဆုံး ပြုံးပြီးခံချင်မိသည် ပါးစပ်နဲ့ဖင်ကို အဆက်မပြတ်အလိုးခံရင်း တစ်ချီပီးကြတော့ ပါးစပ်ထဲ လာပန်းကြသည် ငြိမ်းမရွံမိ လီးနှစ်ချောင်းကို တစ်လှည့်ဆီစုပ်ပေးရင်းက ထပ်ပြီးခံချင်လာပြန်သည်. စုပ်နေတဲ့လီးတွေကလည်း အခုထိ မကျသေးတာမို့ ” လိုးနိုင်သေးလားဟင် ” မိန်းမရယ် မေးရက်တယ် ” မောင်က လိုးလို့မဝပါဘူးဗျ ” ဟျောင့် အတူတူပဲလေကွာ လင်ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရဲ့အပြောကြောင့် ငြိမ်းသဘောကျစွာ တစ်ခစ်ခစ်ရယ်ရင်း ” အာ့ဆို လိုးပေးလေ နော် ” ဘယ်သူအရင်လိုးမလဲ ဟင် ” တစ်ပြိုင်ထဲ လိုးမယ်လေ မောင့်ရဲ့အဖြေကြောင့် ငြိမ်းတစ်ချက်တုန်သွားရသည် တူးဘိုင်ဝမ်း ဇာတ်ကားတစ်ခုကို ပြန်မြင်ယောင်မိတော့ စိတ်ထဲ အမည်မသိတဲ့လှိုင်းက ရိုက်ခက်လာပြန်သည် ” အားးး မောင် ဖြေးဖြေး ” ကိုကို့လီးက ကျွတ်တော့မယ်နော်။
ကိုကို့လီးပေါ် ထိုင်ရင်းအဖုတ်လေးနဲ့ဆောင့်ပေးကာ တစ်ဖန် မောင်က ဖင်ပေါက်ထဲကို လိုးဖို့ လုပ်နေတာပါ ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရဲ့ ညှပ်အလိုးကို ရင်ခုန်စွာခံယူမိတော့ ပြောပြဖို့မစွမ်းနိုင်တဲ့ အရသာထူးတွေက သွေးကျောတစ်လျှောက် ပြေးလွှားနေကြသည် ” အား အား မောင် ဆောင့် ဆောင့် ” အား ကိုကိုရယ် ကောင်းလိုက်တာ ” အားး ဟင့် အား အား….. မကြာမီ မေမေနိုးတော့မည် ဆွမ်းတော်ကပ်ဖို့ ချက်ပြုတ်ရမည့်မေမေ့ကို ငြိမ်းမကူရဲ ရမ္မက်ထန်ကာ ကြမ်းခဲ့သည့်ဒဏ်က စပ်ဖျင်းကာ ကွတတဖြစ်နေသည် ၃နာရီကျော်မှ အိမ်ပြန်သွားကြတဲ့ အသစ်စက်စက်လင်တော်မောင်နှစ်ယောက်လည်း အပြန်လမ်းမှာ ခွေးဆွဲခံနေရမလားမသိ လူသူလေးပါးမသိအောင် ခြေကျင်(ခြေလျင်)လာခဲ့ကြတာတဲ့လေ ဘာပဲပြောပြော ညစ်ပေနေတဲ့ဆံနွယ်တွေကို ခေါင်းလျှော်ပစ်ရင်း မနက် အိပ်ယာမထပဲ ဖျားနေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့သည်….. ပြီးပါပြီ။